पोर्टो रिको को लागि स्थानीय मार्गदर्शक | सडकको लागि एक युगल
अप्रिल 29, 2017 / एक टिप्पणी छोड
क्यू रेको, पोर्टो रिको लिटो मन्डेज, एक पोर्टो रिकाको मूल र यात्रा लेखक द्वारा लेखिएको थियो। टिटोको सामाजिक मिडिया प्रोफाइल भेट्टाउन सकिन्छ यहाँ.
पोर्टो रिको मेरो मनपर्ने ठाउँहरू भ्रमण गर्न सजिलो छ। मैले उठाएको थियो कि त्यहाँ मलाई पूर्वाग्रह छैन, अझै यो मलाई आश्चर्य छ - तपाईं कसरी आफ्नो जीवन को बहुमत को लागि केहि ठाँउ बाँच्न र अझै पनि निरन्तर भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ? यो सजिलो छ, किनकि जहाँ जिन्दगीको अर्थ भनेको तपाईंले यो देख्नु भएको छ र यो Borinquen टापुमा आउनुहुँदा कुनै अपवाद छैन।
तपाईले के पढ्नुहुनेछ भनेर दुई भागहरू, एक यात्रीको नजरबाट र एक स्थानीयको आँखाबाट अर्को हुनेछ। मलाई आशा छ कि तपाईं प्युरिटो रिको मा रुचि को सबै भन्दा राम्रा ठाउँहरू हेर्नको लागि अन्त्य सम्म पुग्नु भयो र टिकट बुक गर्नुहोला!
पुएर्टो रिको केवल 100 मील लामो 35 माइल सम्मको मात्र हो र यो सानो र सबैभन्दा पूर्वी पूर्वी ग्रीटर एन्टिल (क्यूबा, ​​हिस्पेनोला, जमैका र पुर्टो रिको) हो। यद्यपि, यो मतलब छैन कि तपाईंले साइटहरू पोर्टो रिको एक हप्ता लामो छुट्टीमा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ। द्वीपको भित्ता भागहरू अविश्वसनीय साइटहरू छन् जुन तपाईं प्राय: प्रचार यात्रा व्यवसायमा देख्नुहुन्छ, किनकि स्थानीयको सहयोग बिना ठेक्का "पर्यटक" कहिल्यै यो टावरमा उपस्थित छैन। हामी किन द्वीप को प्रस्ताव को मासु मा पुग्नु अघि, चलो उन पारंपरिक पर्यटक स्थलों को बारे मा थोडा कुरा गर्छन र रास्ते मा केहि मोडिहरु।
पोर्टो रिकोको गहिरो बावजुद, तपाईं अझै पनि एकदम धेरै पर्यटक अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र एक मानक पर्यटकको यात्राबाट के प्रस्तावित हुन सक्छ।
तपाईंको पोर्टो रिको साँच्चिकै के हो आफ्नो पारंपरिक भावना को लागि, तपाईं सान जुआन, बेअमोन, वा पुरानो सान जुआन (जहाँ सम्म मेरो मनपर्ने) बाट अवस्थित रहनु हुनेछ। यदि तपाईंले माथि उल्लेख गर्नुभएको निम्न स्थानहरूमा बसिरहनु भएको छ भने, तपाईं उत्कृष्ट समय बाँच्न बाध्य हुनुहुन्छ।
त्यसोभए यी क्षेत्रहरूलाई के प्रस्ताव छ?
पुरानो सान जुआन 1509 मा स्थापित भएको थियो, र यसलाई अविश्वसनीय रूपमा देखाउँछ। सडकमा मुख्यतः कबो पत्थरहरू छन् जुन हिँड्न सुन्दर छन् तर वर्षाको पछि सानो पर्ची (साइड नोट, प्यर्टो रिको एक उष्णकटिबंधीय वर्षाको जंगल हो जुन यसले 1-2 घण्टा दैनिक वर्षाको अपेक्षा गर्दछ)। यसले क्लासिक अपार्टमेन्टहरू, घरहरू, चर्चहरू र अन्य आकर्षक वास्तुकला पनि प्रदान गर्दछ जुन धेरै फरक अझैसम्म चापलूसी देखिन्छ। म एयरब्नबीलाई शहर भित्रको ठाउँ लिन सुझाव दिन्छु, जसमध्ये अधिकांश सुन्दर हुनेछ र सैकड़ों वर्षको इतिहास छ, कुकी-कटरको साथ पारंपरिक होटलको विरोधमा, पर्यटक महसुस हुन्छ।
तपाईं एक दिनमा पुरानो सान जुआन हिड्न सक्नुहुन्छ, कुन कुरा देख्न सकिन्छ को धेरै हेर्नुहोस्, र साँच्चै सुन्दर साइटहरु जस्तै अनुभव गर्नु पर्छ एल मोरोरो। 1589 मा बनाइएको यो किला, मोटो, किशोरी पत्थरों संग पर्खालहरु 18 खुट्टा उच्च छ। तपाईंलाई सस्तो टिकट मूल्यको साथ दुवै साइटहरू (कास्टिलो सान फेलिप डेल मोरो र कास्टिलो सान क्रिस्टोलब) प्रवेश गर्न अनुमति छ, र दुवै समयको लायक छ। यहाँ तपाईं अनुभव गर्न सक्षम हुनेछ कि यो सैनिकहरु को लागि लड्न को लागि देख्यो र टापु मा हेर्न को लागी रहन, तपाईं जीवन को सैकड़ों साल पहिले द्वीप को रक्षा को लागि जस्तै थियो को महसुस दिन।
तपाईं पनि "ला फोर्टलेजा" भ्रमण गर्न सक्षम हुनेछ, पुरानो सान जुआनको मूल रक्षा किफायती एल मोर्रो, सान जुआन बाउटास्ताको कैथेड्रल, पश्चिमी गोलार्धमा सबैभन्दा पुरानो युरोपेली कन्फेन्सन, सान जुआन गेट (1749 मा बनाइएको) र Paseo de la Princesa, जो एक यात्रा जो 1852 मा फर्किन्छ एक यात्रा जहाँ तपाईं कैफे, बेंच, संगीतकार, र विक्रेताओं भेटिन्छ।
पुरानो सान जुआन बाहिर भेन्टिङ त्यहाँ केहि जवाहरातहरू छन् जुन तपाईले भेट्नुहुन्छ। ती हुन् Bacardi कारखाना (यद्यपि यदि तपाईं पेय पदार्थ हुनुहुन्न भने, तपाईं मात्र आवश्यक यस सुविधाको भ्रमण) र एल युनक, एक उष्णकटिबंधीय "वर्षा वन" जुन पोर्तो रिको मा सबैभन्दा ठूलो पर्वत हो। तपाईं पहाड माथि धेरै माथिसम्म हिँड्न अनुमति दिइनेछ, जनावरहरू, नदिहरू र झरनाहरूको केही इतिहास र सुन्दर दृश्यहरू प्राप्त गर्दा। पुरानो भारतीय किंवदंती अनुसार, एक कथा तपाईं अक्सर हुनेछ ", एक राम्रो मनोभाव 'युकुयु' (वा 'योकोहु') आफ्नो शक्तिशाली पहाड-उच्च सिंहासनमा शासन गरिसकेको छ, पोर्टो रिको र यसको मान्छेहरूको संरक्षण।" एल युनक्क यो कथा वास्तविकता दिन।
एकपटक पुरानो सान जुआनका ऐतिहासिक पक्षहरू तपाईंसँग लामो हुनाले, तपाईं सान जुआन क्षेत्रमा धेरै लोकप्रिय समुद्र तटहरूको आनन्द उठाउन बुद्धिमानी हुनुहुनेछ। यी समुद्र तटहरूले अद्भुत दृश्यहरू मात्र प्रदान गर्दैनन् तर ठूलो स्ट्रीट खाना जुन पारंपरिक रूपले तपाईंको सामनेको फलाम काठको साथ पकाएको छ।
यी समुद्र तटहरू समावेश छन्:
• महासागर पार्क - यो अधिक वयस्कों र पारिवारिक किरा को कम गर्दछ। विशाल समुद्र तट, ताड र समुद्र अंगूरका रूखहरूसँग लुकेका हुन्छन्, एक आवासीय पड़ोसीको सुन्दर घरको छेउमा, अन्य सान जुआन समुद्र तटहरू जुन उच्च उदय कन्ससबाट निस्कन्छ। यस idyllic स्थानमा बच्चाहरु भन्दा बढी बियर फेला पार्न अपेक्षा।
• Luquillo Beach - (मेरी श्रीमतीको मनपर्ने समुद्र तट) सान जुआनको नजिकै 30 माइल पूर्व, सान जुआन भन्दा धेरै भन्दा राम्रा र साफ पानी छ। विशाल रेतीले समुद्र तट एक नारियल ग्रोव द्वारा राखिएको एक अर्धशतक आकारको खाडीमा खोल्छ। कोरल चट्टानहरू क्रिस्टल-स्पष्ट लंगोन को प्रायः कुनै न कुनै अटलांटिक पानीबाट सुरक्षित गर्छ जसले उत्तरी तटलाई बसाल्न सक्छ। Luquillo युवा बच्चाहरु लाई तैरने को लागि राम्रो स्थान।
• पाइन ग्रोव बीच -एयरपोर्ट नपुग्नुहोस्, यो एक अर्धशतक-आकार, सेतो रेत समुद्र तट हो जसको शावल, निलो पानी प्रायजसो अटलांटिक अवस्थितबाट अपतटीय चट्टानद्वारा सुरक्षित हुन्छ।
सलाखहरू र पेयहरूका लागि त्यहाँ साँच्चिकै कुनै पनि होइन कि तपाईं गलत हुन सक्नुहुन्न, हरेक पट्टी विशेष ककटेलको अनियमित दृष्टिकोण ल्याउन। मेरो सल्लाह खुला दिमागमा रहनु हो, तपाईंले केहि कुरा सुनेको छैन भनेर प्रयास गर्नुहोस् र स्थानीयको सल्लाह लिन डरो नगर्नुहोस्! म तिमीलाई आश्वस्त गर्न सक्छु कि अधिकांश भन्दा स्वाभाविक रूप र स्वादिष्ट हो। हामी भाग2मा यसको अधिक छौँ, तथापि ...
तब सम्म, मजा र हाजिर छ!
श्रेणी: क्यारिबियन, अतिथि पोस्टहरू, प्युर्तोरिको, यात्रा योजना टैग: कार्बिबियन, उत्तर अमेरिका, पुएर्टो रिको
← यात्रा ब्लगिंग - केही केही महिनामा के आशा छ
आफ्नो यात्रा योजना 10 यात्रा युक्तिहरु →